नयराज पन्त - विकिपिडिया
नयराज पन्त (वि.सं. १९७०- वि.सं. २०५९) मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने विद्वान हुन्।
वि. सं. १९७० साउन २६
वि.सं. २०५९ कात्तिक १८
छोरी अम्बिका, धन र अमिता
कृष्णदत्त पन्त तथा आमा यज्ञयुवादेवी
४ संशोधन मण्डल‍
पन्तको जन्म बाबु कृष्णदत्त पन्त तथा आमा यज्ञयुवादेवीका सुपुत्रका रूपमा वि. सं. १९७० साउन २६ गते महाबौद्ध, काठमाडौँमा भएको थियो। नयराज जन्मेको डेढ वर्षमा नै कृष्णदत्त स्वर्गीय भए। त्यसपछि यज्ञप्रिया आफ्नो नाबालक छोरो बोकेर माइत गइन्। त्यही नै नयराज पन्त हुर्के, बढे र पढे। मामाघरमै १३ वर्षका पन्तको जनकराज पण्डित (पाण्डे)की छोरी १२ वर्षीया बुधकुमारीसँग विहे भयो। पन्तदम्पत्तिबाट दुई छोरा महेशराज पन्त तथा दिनेशराज पन्त अनि तीन जना छोरी अम्बिका, धन र अमिताको जन्म भयो।
पन्तको आफ्नी आमाका बुबा भुवननाथ पाण्डेबाट अक्षराम्भ भएको थियो। पन्तले सानैदेखि मामलका तिनै हजुरबुबाको आडमा ज्योतिष र इतिहास विषयक ज्ञान आर्जन गर्न थालेका थिए। वास्तवमा उनका हजुरबाबु यी दुवै विषयमा संलग्न भएका कारण पन्तले पनि त्यही बाटो मात्रै समाइरहे। उनैको वातावरण, भावना र हुटहुटीले नै पन्तले बाल्यकालदेखि इतिहासमा चासो राखेका थिए। आफ्नो शैक्षिक अनुभव आर्जन गर्नचाहिं उनी कुमारी चोकको भाषा पाठशालामा भर्ना भए। अनि उनी स्रेस्ता पाठशाला पनि पुगे। त्यसपछि उनको पर्ढाई रानीपोखरीको संस्कृत पाठशालामा हुन थाल्यो। पन्तले आफूले जानेको विद्या आफ्ना टोलका आफूभन्दा सानाहरूलाई पनि सिकाउँथे। उनी फकाईफकाई बालबच्चा पढाउँथे तर ट्युसन पढाउँदा कसैसँग पैसा लिदैन थिए। पन्तले काशीको राजकीय संस्कृत पाठशालाबाट गणित ज्योतिषमा आचार्य गरे र उनी त्यसमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम भएका थिए। त्यही क्रममा यिनले संस्कृतको धेरै नै अध्ययन गरेका थिए। वास्तवमा त्यसै बेला उनी संस्कृतभाषा लेख्न र बोल्नमा सिद्धहस्त पण्डितका रूपमा नै प्रस्तुत भएका थिए। साथै यिनले अङ्ग्रेजी साहित्यको पनि विशेष अध्ययन गरेका थिए। अनि हिन्दी भाषाको लेखापढीमा पनि उनको दिलचस्पी थियो।
आचार्य गरेपछि पन्तले रानीपोखरीको संस्कृत पाठशालामा काम पाए। त्यहाँ उनी ज्योतिषको अध्यापक थिए। सरकारी स्कुलमा काम गर्न थालेपछि उनको दिनचर्या पनि राम्रो हुन थाल्यो। उनको कामले उनी आफै पालिने अवस्थामा अनुवाद हुन थाले। त्यसपछि उनी लेखन र सम्पादनमा पनि जुट्न थाले। पन्तको योगदान वाल्मीकि विद्यापिठमा पनि पुग्यो। त्यहाँ उनी नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणी अधिकृत स्तरका प्राध्यापकका नियुक्त भए। अनि उनले त्यहाँ झन्नै सत्र वर्षसेवा गरे। त्यसपछि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अन्वेषणमा पसे। अनि उनी खगोल गणित ज्योतिषमा संलग्न भए। त्यसपछि उनको योगदानको चर्चा राजदरबारसम्म पनि पुग्यो। परिणाम स्वरूप उनी झन्नै पन्ध्र वर्षम्म नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्यमा आबद्ध भए।
मुख्य लेख: संशोधन मण्डल
पन्तले नेपाली भाषासाहित्यको उत्थानका लागि किशोरावस्थादेखि आफ्नो गच्छे रोपे। उनको जागरणका कारण उनी नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिको सदस्य पनि भए। त्यहाँ पनि यिनले आफ्नो मन, वचन र कर्म अर्पण गरे। आफू इतिहासमा जागरुक भएपछि यिनको समेत पहलमा वि.सं. २००९ सालमा संशोधन मण्डलको स्थापना भयो। त्यसपछि उनी एकोहोरो त्यहीं लागिरहे। संशोधन मण्डलले नेपालको इतिहासका धेरै तथ्यहरू खोजेर बाहिर ल्याएको छ । पन्तले नेपाली पात्रोलाई आकाशमा देखिने वास्तविक ग्रह स्थितिअनुसार शुद्ध पार्ने योजना बनाए र तत्कालीन सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरे, तर पञ्चायती सरकारले उनको त्यो योजनालाई कुनै सहयोग गरेन । पन्तले फुटकर रूपमा कविता र प्रबन्ध लेखे। धेरै चाहिं उनले इतिहास नै लेखे। उनका इतिहास विषयक पुस्तकमात्र पन्ध्रवटा प्रकाशित भए। साथै उनीद्वारा लिखित ज्योतिष विषयक कृतिहरू मात्र दसवटा प्रकाशनमा आए। उनीद्वारा लिखित संस्कृत वाङ्मयका बारे लेखिएको एउटा कृति पनि प्रकाशनमा आएको छ।
उनले लिच्छवि संवत्‌को निर्णय नामक ग्रन्थका लागि मदन पुरस्कार वि.सं. २०४३ प्राप्त गरेका हुन्। पन्तले नेपाली परिवेशमा समर्पित रही सेवा गरेबापत गोरखा दक्षिण बाहु प्रथम ग्रहण गरे। त्योभन्दा अघि नै यिनले महेन्द्र विद्याभूषण पाइसकेका थिए। साथै उनले त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार, मदन पुरस्कारलगायत विभिन्न प्राज्ञिक, वाङ्मयी र सामाजिक सङ्घसंस्थाबाट सम्मान, अभिनन्दनहरू ग्रहण गरिरहे। साथै पन्तलाई वि.सं. २०५७ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्मानार्थ महाविद्यावारिधी (डीलिट) प्रदान गरिएको थियो।
उनको निधन वि.सं. २०५९ साल कात्तिक १८ गते भएको थियो।
नयराज पन्त स्कुल अफ हिस्ट्री
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=नयराज_पन्त&oldid=994006" बाट अनुप्रेषित